संसदमा प्रयोग भएका कण्डम भेटिएपछि हंगामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
संसदमा प्रयोग भएका कण्डम भेटिएपछि हंगामा
एजेन्सी । नेपाली संसदमापनि कहिलेकाही हंगामा हुने गरेको छ । कहिले कुर्सी तोड्ने, कहिले हानाहान गर्ने त विश्वका अधिकांश संसद हलमा भइरहेका कार्य हुन् । त्यो मध्यपनि स्क्याण्डल नै स्क्याण्डलले भरिएको बेलायती संसद त झनै कुरै नगरौँ । अहिले फेरी बेलायती संसदबाट यो पटक एउटा अच्चमको समाचार बाहिर आएको छ ।
सन्डे टाइम्सका अनुसार सांसदहरु संसदमा प्रयोग भएको कन्डम बोकेर आउने गरेको खुल्न आएको छ । यो खुलासा उक्त कार्यालयमा सरसफाईको काम गर्ने कामदारहरुले गरेका हुन ।
उनिहरुका अनुसार ब्रिटेन संसदमा सासंसदहरुले प्रयोग गरिएको कन्डम बोकेर आउँने गरेको आरोप लगाएका हुन । उनिहरुका अनुसार संसदमा जथाभावि फोहोर गरेको बान्ता गरेका साथैं प्रयोग भएको कन्डम फालिएको भन्ने आरोप लगाएका छन । पश्चिमा देशहरुमा यौन सामान्य भएपनि संसद भवनभित्र यस्तो हुनुले देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउँने कुरामा त्यहाँमा मानिसहरु विश्वास गर्दछन ।
सफा गर्ने कामदारहरूले आरोप लगाएका छन् कि बेलायतमा सांसदहरूले आफ्नो कार्यस्थल बर्बाद गर्दैछन्।
उनले मुद्दा दर्ता गरे कि एक सांसद उनको पछि लागे र उनको शरीर छेड़छाड गरे। यो खुलासे संघ बन्द थियो र नयाँ व्यवस्थापन गर्न भन्दा हस्तान्तरण पछिको यो घटना हो ।
यसबाहेक, धेरै जना अभियोगहरू यौन दुर्व्यवहारको लागि बेलायती संसदमा भएको बयान दिएका थिए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रक्षा सचिव सर माइकल फोलन, जसले पहिले महिलालाई यौन दुव्र्यवहार स्वीकार गरेपछि संसद छोडेका थिए।
फलोन सहयोगी डेमियन ग्रीन समय को आफ्नैं सहयात्रीको कम्प्युटरमा पाइने अश्लील सामाग्रीको बारेमा झूट बयान दिएका थिए ।